A woman walks withaboy throughastreet market in Yangon on April 2, 2021. (Photo by STR / AFP)
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေ ကြုံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းတွေ အပြည့်အဝ မလည်ပတ်နိုင်တာကြောင့် ဝင်ငွေထိခိုက်နေရသလို၊ သုံးစွဲနိုင်အားလည်း သိသိသာသာ ကျဆင်းလာနေတယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အကျပ်အတည်းတွေကြောင့် စီးပွားရေး ပြိုကွဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ ကြုံရမှာကို ပြည်တွင်းပြည်ပက စိုးရိမ်နေချိန်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အမြန်ဆုံး လုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မြင်ကြပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမင်းခင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဖိနပ်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များသင်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းနဲ့ အမည်မဖော်လိုသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဝင်ငွေနဲ့ စီးပွားထိခိုက်ပြီး သုံးစွဲမှုသိသိသာသာ ကျဆင်းလာတာကို ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံက အမည်မဖော်လိုသူ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်က ......
ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုံက အမည်မဖော်လိုသူ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် ။. ။ လူတွေရဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှုကျတယ်။ နိုင်ငံခြားက သုံးစွဲနိုင်မှုကျတယ်။ ကျနော်တို့ဆို ဒီနှစ်တနှစ်လုံး အဝတ်စား မဝယ်သလောက်ပဲ။ ပြောချင်တာက လူတွေက ကိုဗစ်ကြောင့် အပြင်သိပ်မထွက်ကြဘူး။ အပြင်မထွက်ရင် အဝတ်စားဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ လူတွေက စီးပွားရေး မကောင်းတဲ့အတွက် လိုအပ်မှပဲဝယ်မယ်။ လူတွေရဲ့ Consumption Power ကျသွားတယ်။ အကုန်ကိုကျတာ။ မနေ့က မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ စကားပြောတော့ အခု ကြက်သားဈေးက ကျတယ်။ ကြက်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေဆို တော်တော် အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဘာလိုဆိုတော့ သူတို့က နေ့စဉ် အကောင်ရေ တခါတခါထွက်ရင် သောင်းနဲ့ချီ ပြီး ဝယ်မယ့်လူမရှိလို့ Waste လုပ်လိုက်ရင် ဒီအချိန်ကတော့ Survival ဘယ်လိုရှင်သန်ရမလဲဆိုတာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေရတဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အလားတူ ဖိနပ်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလည်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလောက်မဆိုးပေမယ့် အမှာတွေကျလာပြီး ရှင်သန်အောင် တောင့်ခံထားရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖိနပ်ချုပ်အသင်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း ကဆိုပါတယ်။
ဦးအောင်မင်း ။. ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ တော်တော်ကို စီးပွားကျတယ်။ အားလုံးက ဘာလုပ်စားရမှန်းကို မသိကြဘူး။ အဓိက ကိုဗစ်က အဓိက။ ကိုဗစ်က ပထမလှိုင်း၊ ဒုတိယလှိုင်း ၊ တတိယလှိုင်း တော်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်။ ဈေးရောင်မရဘူး ။ ဈေးတွေပိတ်တယ်။ အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ ဘဏ်ပြသာနာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ငွေကြေးက ကြိုက်သလောက်ထုတ်မရဘူး။ အထည်ချုပ်လောက်တော့ ကျနော်တို့က မဆိုးဘူး။ Order ကျရင်ကျသွားမယ်။ အရင်တုံးက တလကို Container အလုံးတရာပို့နိုင်မယ်ဆိုရင် အခု ၇ဝ နဲ့ ၆ဝ လောက်တော့ ပို့နိုင်သေးတာပေါ့။ လုပ်ငန်းကတော့ လည်ပတ်နေတုံးပဲ။ တောင့်ခံနေတုံးပဲပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလိုတောင့်ခံနိုင်အောင် အမြန်ပြုပြင်ပြောင်းမှုကိုမေးရာမှာ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က
ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ။. ။ အခုလက်ရှိအခြေနေမှာ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ငွေကြေးစနစ်တွေ ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေ ဘက်စုံပေါ့နော် အခက်ခဲတွေကို ဖြေရှင်းရမှာပေါ့နော်။ ဥပမာ ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ဆိုတာ လိုအပ်ချက်များတယ်။ ဘာလို့လိုအပ်ချက်များလဲဆိုရင် တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းလဲဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်ရခက်တာကို ။ နိုင်ငံခြားက ဝယ်သွင်းတာက ပိုပြီးတော့ အမြတ်ရပြီးတော့ တခြားအာစီယံနိုင်ငံတွေကြည့်ရင် ကျနော်တို့အထက်မှာရှိတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက investment လုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာရွေးမလား၊ ကမ္ဘောဒီးယားရွေးမလား ၊ ဗီယက်နမ်ရွေးမလားဆိုရင် တခြားသွားနိုင်မယ့်အနေအထားကို ပိုပြီးရွေးချယ်ကြမယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလိုဖြေရှင်းဖို့ နောက်အမြန်ဖြေရှင်းသင့်တာကိုလည်း ဦးအောင်မင်း က
ဦးအောင်မင်း ။. ။ လုပ်သာကိုင်သာရှိအောင် အကုန်ဖြေလျှော့လိုက်ဗျာ။ ဥပမာ မြေမရှိဘူး။ ရှိတဲ့မြေကလည်း စက်မှုဇုံမှ ဆောက်လို့ရမယ်။ ထိုင်းဆိုရင် လယ်ကွင်းဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ စက်ရုံဆောက်တယ်။ ကန့်ကွက်မယ့်လူမရှိရင် စက်ရုံဆောက်ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီတခုပဲ မြေကွက်ချပေးရင် လက်ဦးမှုယူသွားကြပြီ။ တကယ်တန်း နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီမြုတ်နှံချင်တဲ့သူလာလည်းလာရော မြေမရှိတော့ဘူး။ မြေကိုင်ထားသူတွေကလည်း မတရားအောတော့တာပဲ ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ မြေမရလို့ဆိုပြီး ကမ္ဘောဒီးယားပြောင်းသွားတာတို့၊ ဗီယက်နမ်ပြောင်းသွားတာတို့အများကြီး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ စီးပွားရေးလေ့လာသူ ဦးမင်းခင် ကလည်း အရင်တုံးကလိုမမှားပဲ အခုဆက်ပြင်သင့်တာကို ...
ဦးမင်းခင် (စီးပွားရေးလေ့လာသူ) ။. ။ ကျနော်တို့က ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ ရပ်တည်ရေးအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၃ဝအတွင်း အများကြီး ဒုက္ခရောက်တယ်။ ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်တာက ကမ္ဘာမှာ ဝင်မဆန့်ဘူး။ အများနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပဲ ဥပမာပေးမယ်။ နယ်စပ်ကို ပစ္စည်းရောက်ပြီး ဟိုဖက်က ဝယ်မှ ကျနော်တို့က ရောင်းရမယ်။ ဟိုဖက်က မဝယ်ရင်မရောင်းရဘူး။ နောက်ဆုံး ဟိုဖက်က ပေးတဲ့ဈေးနဲပဲရောင်းရတယ်။ နယ်စပ်ကပဲ ထွက်ထွက် ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးပုံစံနဲ့ထွက်။ ဆိုလိုတာက ကျနော်တို့ ကုန်ပစ္စည်းက ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေနေ သက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကနေ ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးနည်းလမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ဒဏ်ခံရပြီးသား စီးပွားရေးဟာ လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းမှုအောက်မှာ ပိုဆုတ်ယုတ်ကျနေတာမို့ ပြန်နလန်ထူရေး စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်း ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဖို့လိုနေပြီလို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေက ထောက်ပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုဗဈကပျရောဂါနဲ့ စဈအာဏာသိမျးမှုနောကျဆကျတှဲ နိုငျငံရေး အကပျြအတညျးတှေ ကွုံနရေတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ လုပျငနျးတှေ အပွညျ့အဝ မလညျပတျနိုငျတာကွောငျ့ ဝငျငှထေိခိုကျနရေသလို၊ သုံးစှဲနိုငျအားလညျး သိသိသာသာ ကဆြငျးလာနတေယျလို့ လုပျငနျးရှငျတှနေဲ့ စီးပှားရေး ကြှမျးကငျြသူတှကေ သုံးသပျကွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက အကပျြအတညျးတှကွေောငျ့ စီးပှားရေး ပွိုကှဲနိုငျတဲ့ အခွအေနအေထိ ကွုံရမှာကို ပွညျတှငျးပွညျပက စိုးရိမျနခြေိနျမှာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုတှေ အမွနျဆုံး လုပျဖို့ လိုအပျကွောငျးလညျး လုပျငနျးရှငျတှနေဲ့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ မွငျကွပါတယျ။
မွနျမာ့စီးပှားရေး အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ စီးပှားရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးမငျးခငျ၊ မွနျမာနိုငျငံဖိနပျခြုပျလုပျငနျးရှငျမြားသငျး ဥက်ကဌ ဦးအောငျမငျးနဲ့ အမညျမဖျောလိုသူ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦးကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျး တငျပွထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဟုတျကဲ့။ ဝငျငှနေဲ့ စီးပှားထိခိုကျပွီး သုံးစှဲမှုသိသိသာသာ ကဆြငျးလာတာကို ရှလေငျပနျးစကျမှုဇုံက အမညျမဖျောလိုသူ စကျမှုလုပျငနျးရှငျက ......
ရှလေငျပနျး စကျမှုဇုံက အမညျမဖျောလိုသူ စကျမှုလုပျငနျးရှငျ ။. ။ လူတှရေဲ့ သုံးစှဲနိုငျမှုကတြယျ။ နိုငျငံခွားက သုံးစှဲနိုငျမှုကတြယျ။ ကနြျောတို့ဆို ဒီနှဈတနှဈလုံး အဝတျစား မဝယျသလောကျပဲ။ ပွောခငျြတာက လူတှကေ ကိုဗဈကွောငျ့ အပွငျသိပျမထှကျကွဘူး။ အပွငျမထှကျရငျ အဝတျစားဝယျစရာမလိုဘူးပေါ့နျော။ လူတှကေ စီးပှားရေး မကောငျးတဲ့အတှကျ လိုအပျမှပဲဝယျမယျ။ လူတှရေဲ့ Consumption Power ကသြှားတယျ။ အကုနျကိုကတြာ။ မနကေ့ မိတျဆှတေယောကျနဲ့ စကားပွောတော့ အခု ကွကျသားဈေးက ကတြယျ။ ကွကျသားပေါကျထုတျလုပျရေး လုပျငနျးတှဆေို တျောတျော အခကျခဲနဲ့ရငျဆိုငျနရေတယျ။ ဘာလိုဆိုတော့ သူတို့က နစေ့ဉျ အကောငျရေ တခါတခါထှကျရငျ သောငျးနဲ့ခြီ ပွီး ဝယျမယျ့လူမရှိလို့ Waste လုပျလိုကျရငျ ဒီအခြိနျကတော့ Survival ဘယျလိုရှငျသနျရမလဲဆိုတာကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ကွိုးစားနရေတဲ့ အနအေထားမှာရှိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အလားတူ ဖိနပျခြုပျလုပျငနျးမှာလညျး အထညျခြုပျလုပျငနျးလောကျမဆိုးပမေယျ့ အမှာတှကေလြာပွီး ရှငျသနျအောငျ တောငျ့ခံထားရတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံ ဖိနပျခြုပျအသငျး ဥက်ကဌ ဦးအောငျမငျး ကဆိုပါတယျ။
ဦးအောငျမငျး ။. ။ ကနြျောတို့နိုငျငံ တျောတျောကို စီးပှားကတြယျ။ အားလုံးက ဘာလုပျစားရမှနျးကို မသိကွဘူး။ အဓိက ကိုဗဈက အဓိက။ ကိုဗဈက ပထမလှိုငျး၊ ဒုတိယလှိုငျး ၊ တတိယလှိုငျး တျောတျောလေးခံလိုကျရတယျ။ ဈေးရောငျမရဘူး ။ ဈေးတှပေိတျတယျ။ အမြိုးမြိုးပေါ့လေ။ ဘဏျပွသာနာတှရှေိတယျပေါ့ဗြာ။ ငှကွေေးက ကွိုကျသလောကျထုတျမရဘူး။ အထညျခြုပျလောကျတော့ ကနြျောတို့က မဆိုးဘူး။ Order ကရြငျကသြှားမယျ။ အရငျတုံးက တလကို Container အလုံးတရာပို့နိုငျမယျဆိုရငျ အခု ၇ဝ နဲ့ ၆ဝ လောကျတော့ ပို့နိုငျသေးတာပေါ့။ လုပျငနျးကတော့ လညျပတျနတေုံးပဲ။ တောငျ့ခံနတေုံးပဲပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုတောငျ့ခံနိုငျအောငျ အမွနျပွုပွငျပွောငျးမှုကိုမေးရာမှာ ရှလေငျပနျး စကျမှုဇုံက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျက
ရှလေငျပနျးစကျမှုဇုံက စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ ။. ။ အခုလကျရှိအခွနေမှော ဘဏျစနဈနဲ့ ငှကွေေးစနဈတှေ ဒျေါလာဈေးနှုနျးတှေ ဘကျစုံပေါ့နျော အခကျခဲတှကေို ဖွရှေငျးရမှာပေါ့နျော။ ဥပမာ ဒျေါလာဈေးတကျတယျဆိုတာ လိုအပျခကျြမြားတယျ။ ဘာလို့လိုအပျခကျြမြားလဲဆိုရငျ တျောတျောမြားမြား နိုငျငံခွားကတငျသှငျးလဲဆိုရငျ ပွညျတှငျးမှာ ထုတျရခကျတာကို ။ နိုငျငံခွားက ဝယျသှငျးတာက ပိုပွီးတော့ အမွတျရပွီးတော့ တခွားအာစီယံနိုငျငံတှကွေညျ့ရငျ ကနြျောတို့အထကျမှာရှိတယျ။ တခွားနိုငျငံတှကေ investment လုပျမယျဆိုရငျ မွနျမာရှေးမလား၊ ကမ်ဘောဒီးယားရှေးမလား ၊ ဗီယကျနမျရှေးမလားဆိုရငျ တခွားသှားနိုငျမယျ့အနအေထားကို ပိုပွီးရှေးခယျြကွမယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုလိုဖွရှေငျးဖို့ နောကျအမွနျဖွရှေငျးသငျ့တာကိုလညျး ဦးအောငျမငျး က
ဦးအောငျမငျး ။. ။ လုပျသာကိုငျသာရှိအောငျ အကုနျဖွလြှေော့လိုကျဗြာ။ ဥပမာ မွမေရှိဘူး။ ရှိတဲ့မွကေလညျး စကျမှုဇုံမှ ဆောကျလို့ရမယျ။ ထိုငျးဆိုရငျ လယျကှငျးဝယျလိုကျတယျ။ အဲဒီမှာ စကျရုံဆောကျတယျ။ ကနျ့ကှကျမယျ့လူမရှိရငျ စကျရုံဆောကျရတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက ဒီတခုပဲ မွကှေကျခပြေးရငျ လကျဦးမှုယူသှားကွပွီ။ တကယျတနျး နိုငျငံခွားက ရငျးနှီမွုတျနှံခငျြတဲ့သူလာလညျးလာရော မွမေရှိတော့ဘူး။ မွကေိုငျထားသူတှကေလညျး မတရားအောတော့တာပဲ ။ ကနြျောတို့နိုငျငံမှာ မွမေရလို့ဆိုပွီး ကမ်ဘောဒီးယားပွောငျးသှားတာတို့၊ ဗီယကျနမျပွောငျးသှားတာတို့အမြားကွီး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ စီးပှားရေးလလေ့ာသူ ဦးမငျးခငျ ကလညျး အရငျတုံးကလိုမမှားပဲ အခုဆကျပွငျသငျ့တာကို ...
ဦးမငျးခငျ (စီးပှားရေးလလေ့ာသူ) ။. ။ ကနြျောတို့က ကိုယျနညျးကိုယျဟနျနဲ့ ရပျတညျရေးအတှကျ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ၃ဝအတှငျး အမြားကွီး ဒုက်ခရောကျတယျ။ ကိုယျနညျးကိုယျဟနျနဲ့ စီးပှားရေးလုပျတာက ကမ်ဘာမှာ ဝငျမဆနျ့ဘူး။ အမြားနဲ့ မလုပျနိုငျဘူး။ နယျစပျကုနျသှယျရေးကိုပဲ ဥပမာပေးမယျ။ နယျစပျကို ပစ်စညျးရောကျပွီး ဟိုဖကျက ဝယျမှ ကနြျောတို့က ရောငျးရမယျ။ ဟိုဖကျက မဝယျရငျမရောငျးရဘူး။ နောကျဆုံး ဟိုဖကျက ပေးတဲ့ဈေးနဲပဲရောငျးရတယျ။ နယျစပျကပဲ ထှကျထှကျ ပုံမှနျကုနျသှယျရေးပုံစံနဲ့ထှကျ။ ဆိုလိုတာက ကနြျောတို့ ကုနျပစ်စညျးက ဘယျနရောမှာပဲရှိနနေေ သကျဆိုငျရာလမျးကွောငျးကနေ ပုံမှနျကုနျသှယျရေးနညျးလမျးနဲ့အလုပျလုပျလို့ရမယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈဒဏျခံရပွီးသား စီးပှားရေးဟာ လကျရှိစဈအာဏာသိမျးမှုအောကျမှာ ပိုဆုတျယုတျကနြတောမို့ ပွနျနလနျထူရေး စဈကောငျစီဖကျကလညျး ငှကွေေးစိုကျထုတျဖို့လိုနပွေီလို့ စီးပှားရေး ပညာရှငျတှကေ ထောကျပွနကွေပါတယျခငျဗြာ။